Fikarohana momba ny firaisana Ny Tranom-pitaovan'ny Governemanta Nasionalista Bomber | Carl Edon - Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana
Mpikaroka: James Edon, Dr. Nicholas McClean-Rice sy Ian Stevenson, MD-Video omenao eto ambany
Ny ray kristiana dia manadihady ny fiainany taloha momba ny zanany dia fahatsiarovana ny naha-mpanamory fiaramanidina nazia azy
Teraka tamin'ny volana 29, 1972 tany Middlesbrough, Angletera nankany James sy Valerie Edon i Carl Edon. Ny Edons dia anisan'ny Fiangonan'i Angletera ary toy izany, dia Kristianina izay tsy nino ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao indray. Tamin'ny voalohany, dia nalahelo mafy izy ireo noho ny filazan'i Carl mikasika ny maha-mpitondra fiaramanidina baomba malaza azy. Tamin'ny farany, ny rainy, James Edon, mpamily fiara fitateram-bahoaka, dia lasa mpanadihady voalohany momba ity tranga ity.
Mitovitovy amin'i Casey Leininger Reincarnation Case
Amin'ny fomba maro dia mitovy amin'ny tranga vao teraka indray io tantara io James Huston, Jr. | James Leininger, izay fony mbola zaza dia nahatsiaro ny fiainany taloha tamin'ny naha-mpanamory fiaramanidina mpiady amerikana azy izay maty tamin'ny ady tany Pasifika, nandritra ny ady tany Iwo Jima. Tahaka ny nahatongavan'i James Edon ho mpikaroka ny fahatsiarovan-tenan'ny zanany taloha, Bruce Leininger, rain'i James Leininger, dia lasa mpikaroka ny fahatsiarovana ny fiainany taloha. Bruce dia kristiana nafana fo, izay nanana olana tamin'ny fiheverana ny vatana vaovao indray ho fanazavana ny fahatsiarovana ny zanany lahy, na dia lasa mpino aza izy tamin'ny farany.
Ny fahalalana taloha nataon'i Carl Edon momba ireo marika an'habakabaka sy fiaramanidina alemana
Nanome toky i James Edon fa tsy nanana boky maro tao an-tranony ny fianakaviany ary tsy nisy tamin'izy ireo tamin'ny Ady Lehibe II. Tahaka ny tamin'ny raharaha Leininger, ireo ray aman-drenin'i Carl dia nanamafy fa tsy nahalala ny antsipiriany momba ny Ady Lehibe Faharoa tamin'ny fandaharam-boky na fandaharana amin'ny fahitalavitra i Carl.
James Edon nanamarika fa raha hanome fanazavana momba ny fiaramanidina Airbus Alemana i Carl, i James Edon tenany dia tsy maintsy mijery boky ao amin'ny tranombokim-panjakan'ny tanàna mba hanamafisana fa marina ny filazan'i Carl.
Lahatsoratra iray momba ity tranga ity dia navoaka tao amin'ny gazetiboky anglisy, Women's Own, tamin'ny 7 1982 tamin'ny 17. Nisy mpanao gazety alemà nanadinadina ny fianakaviana ary namoaka lahatsoratra momba ity tranga ity tany amin'ny gazety Berlin, Morgenpost, tamin'ny Jolay 1983, XNUMX.
Ian Stevenson, MD, niasa niaraka tamin'ny mpiara-miasa tany Angletera, Dr. Nicholas McClean-Rice, izay nandeha nanadinadina ny fianakaviana Edon tamin'ny Janoary 1984, fony i Carl dia 11 taona. Tamin'ny Jona 13, 1993, Ian Stevenson mihitsy no nandeha tany Middlesbrough ary nanana fihaonana lava be niaraka tamin'ny fianakaviana, tamin'ny fotoana nananan'i Carl ny 20 taona.
Nilaza i Carl fa nianjera tamin'ny fiaramanidina iray izy, nitokona tamin'ny fiainam-pirenena taloha ary niarahaba an'i Swastikas sy voromahery alemà
Tamin'ny 1974, raha efa ho 2 taona i Carl ary efa nanomboka niteny izy, dia nanomboka nilaza izy hoe: "Nopotehiko ny fiaramanidina iray amin'ny varavarankely iray." (1) Nilaza izany matetika izy ary rehefa nihalehibe izy, dia hoy izy nanampy tsipiriany. Raha vao niresaka momba ny fiainany teo aloha izy dia tsy maintsy nanao azy Nazi salute, miaraka amin'ny sandriny havanana raisina sy mahitsy.
Niteny tamin'ny ray aman-dreniny i Carl fa teo am-panaovana baomba tany Angletera izy rehefa nianjera. Rehefa nianatra naka sary izy, izay nitranga fony izy 2-3 taona, dia nanomboka nanisa izy swastikas, marika sy tsiambaratelo. Naka fiaramanidina i Carl ary nametraka swastikas teo aminy.
Naka voromahery iray izy, izay nofaritan'ny ray aman-dreniny ho toy ny "Alemana. "Nilaza tamin'ny ray aman-dreniny i Carl fa i Robert no anarany, fony izy nandositra ilay bombera ary i Fritz ny anaran-drainy. Nanamarika ny ray aman-dreniny fa nanomboka tamin'ny 1974 ka hatramin'ny 1976, dia niresaka betsaka momba ny fiaramanidina avaratr'i Alemaina i Carl.
Fahalalana momba ny fiainana taloha: Carl draws a cockpit aircraft and explains the gauges
Tamin'ny taona 6, Carl dia nanamboatra tetezin'ny fiaramanidina fiaramanidina ary namaritra ny tanjon'ireo dingana samihafa. Nilaza izy fa teo am-baravarankely dia nisy pedal-tongotra mena izay nampiasaina hamotsorana baomba.
Fahatsiarovana an-davanandro: Carl Flew a Messerschmitt ho any Angletera
Niteny tamin'ny ray aman-dreniny i Carl fa rehefa nianjera teo am-baravarankely izy dia nanidina mpitaingina iray antsoina hoe a Messerschmitt. Misy sary avy amin'ny jiolahy Messerschmitt dia omena etsy ambany sy eo ankavanana. Nilaza izy fa nanana number iray izy, izay 101 na 104-ny ray aman-dreniny dia tsy nahatsiaro ny isa marina.
Ny fahalalan'i Carl ny antsipirian'ny fiaramanidina Alemanina dia mampatsiahy indray James Huston, Jr. | James Leininger raharaha momba ny fanambadiana, satria kely i James Leininger no nahafantatra ny fiaramanidina Amerikanina sy Japoney tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, nahafantatra fa tsy nianatra tamin'ny fomba mahazatra izy.
Rehefa nijery dokam-barotra momba ny Holocaust ny fianakavian'i Edon, dia nilaza i Carl fa teo akaikin'ny toby fitanana iray izay nasongadina tamin'ilay fandaharana ny toby miaramila. Nihevitra ny ray aman-dreniny fa i Auschwitz no niantso ny toby fitanana tany Carlton, saingy tsy nahatsiaro ho azo antoka izy ireo.
Robert dia nanary leg teo am-pandriany ary Carl dia manana mari-pahaizana momba ny fiainam-piarahamonina taloha
Niteny i Carl fa teo am-baravarankely izy raha nianjera ary very ny tongony havanana amin'ny fianjerana. Ian Stevenson dia liana fatratra amin'ny tranga izay nahatonga ny olona iray nijaly noho ny ratra amam-pangoromamy nandritra ny androm-piainany teo aloha dia hiverina indray amin'ny fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesosy. Tamin'ity tranga ity, dia nanamarika i Stevenson fa manana mari-pahaizana be dia be i Carl, ary manana porofo mazava izy raha toa ka misy ifandraisany amin'i Robert ny feony marina tamin'ilay fianjerana.
I Carl dia manao ny dingana goose, mijoro eo am-piheverana ary te-hifindra any Alemana
Araka ny efa nomarihany, vantany vao nanomboka niresaka momba ny fiainany taloha i Carl, ka nipaka tamin'ny varavarankely izy, dia nitifitra ny salan'isan'ny Nazia, niaraka tamin'ny sandriny havanana ary nitraitra.
Rehefa nandeha izy, dia nanao ny dingana nazisin'ny Nazi izy, nanao diabe niaraka tamin'ny lohaliny. Rehefa nanao ny dingana goose izy tany am-pianarana, dia nanenjika azy mafy ny mpiara-mianatra taminy Anglisy ary niantso azy ho Nazia. Ity fampihomehezana ity dia nitarika an'i Carl tsy hiresaka momba ny fiainany taloha fony izy 10 na 11.
Rehefa nitsangana izy, dia nitazona sy nijoro tamin'ny fihazonana azy izy ary hanohana ny tanany, toy ny miaramila kely. Mendrika sy madio izy, izay hitan'i Ian Stevenson ho endrika alemana.
Niteny tamin'ny ray aman-dreniny i Carl fa te-hody any Alemaina izy. Toy izany ny tranga iray Japoney miaramila nanenika tany Birma izay te-hifindra tany Japon.
Raha tian'ny ray aman-dreniny dite, ny fomba nentim-paharazana britanika, i Carl dia nampiasa kafe, alim-bahiny alemana. Tiany koa ny sausages, izay malaza any Alemaina. Rehefa naverina navoaka ny kilalao alemà nisy azy tany am-pianarana, dia nanizingizina i Carl fa halefa tahaka ny Alemà izy.
Ny fiainan'i Carl's Past Alemana
Na dia manana volo mainty aza ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviany, dia tena be volo i Carl. Nanan-maso manga i Carl, tahaka ny reniny, na dia ny ankamaroan'ny fianakaviany izay nanana maso manopy maso aza. I Carl dia nanana ny endrik'I Hitler izay noheverina ho toetran'ny hazakazaka ambony.
Fanamarinana ny fahatsiarovana ny fiainan'i Carl sy ny fahafatesany
Indrisy anefa fa ny filazan'i Carl momba ny pilina alemà iray antsoina hoe Robert nianjera tamin'ny varavarankely iray tany Angletera dia tsy azo nafenina tamin'ny rakitsoratra ara-tantara tamin'ny fotoana namoahan'i Ian Stevenson an'ity raharaha ity. Mifanohitra amin'ny James Huston, Jr. | James Leininger raharaha momba ny harerahana, izay nanamarina ara-tantara tamin'ny alalan'ny fikarohana lalina nataon'i Bruce Leininger.
Matetika i Carl dia maty tamin'ny 1995 tamin'ny taonan'ny 22, izay niharan'ny famonoana.
Famotopotorana ny raharaha momba ny zaridaina Edon
Ny gazety anglisy, ny Evening Gazette nandefa lahatsoratra mikasika ny raharaha Edon tamin'ny 15 Janoary 2002, izay nohavaozina tamin'ny taona 2013. Ity lahatsoratra ity dia omena etsy ambany:
Ny raharaha tranainy nataon'i Carl Edon
Nandritra ny taona maromaro talohan'ny namonoana azy tamin-kerisetra dia niezaka nandresy lahatra ny fianakaviany i Carl Edon fa navaozina indray izy.
Ankehitriny dia manjavona sarimihetsika vaovao, hita avy amin'ny asa nataon'ny mpahay tantara iray mpikaroka iray, dia mampiseho ny fitoviana manjavozavo eo amin'i Carl sy ny mpamboly alemana, Heinrich Richter, nalevina tao amin'ny fasan'ny Thornaby.
Richter, mpitifitra turret, maty tsy tra-drano rehefa nianjera tamin'ny lalamby South Bank ny baomba nataony nandritra ny fanafihana 60 taona lasa izay… 15 Janoary 1942.
Ny vaky sasan'ny Dornier, simba tamin'ny alàlan'ny afo fanoherana ny fiaramanidina talohan'ny nidona tamin'ny balaonina barrage, dia hita tamin'ny 1997 nilevina teo amin'ny Tilbury Road - zato metatra vitsivitsy monja avy teo amin'ilay toerana namonoana an'i Carl roa taona lasa izay.
Rehefa nohadina ilay baomba niaraka tamin'ny taolan'ny Richter tao anatiny, dia nangovitra ny ray aman-drenin'i Carl, Jim sy Val, raha nahatadidy ny tantaran'ny teraka tao amin'ny vatana vaovao indray izy ireo.
Fa izao fotsiny - araka ny nanambaràn'ny Gazety voalohany hoe nanao ahoana ilay airman - dia ny mpivady Coulby Newham no mijery ny fitakian'ny zanak'izy ireo amin'ny fomba vaovao.
“Izy io no tokony ho izy,” hoy i Val iray gaga, rehefa naseho ny sarin'ny Alemanina nanao fanamiana feno fotoana fohy talohan'ny nianjeran'i Teesside.
“Mahagaga ny fitoviana amin'ny maso sy ny orona.
"Angamba ity no ampahany farany amin'ny jigsaw," hoy izy.
Ity sary manaitra ity dia nalaina taorian'ny nanarahan'ny mpahay tantara sy mpanoratra an'i Guisborough, Bill Norman ny fianakavian'i Richter any Alemana hahazoana boky vaovao.
Ny tsy fitoviana hafahafa eo amin'ireo tovolahy roa sy ny zava-misy izay iraisan'ny fahafatesan'izy ireo mihoatra ny 50 taona ny elanelany dia roa amin'ireo fifanandrifian-javatra hafahafa izay nahataitra ny ray aman-drenin'i Carl.
Nandritra ny fitrandrahana ilay baomba alemà dia fantatra fa ny tongotr'i Richter, izay mbola tao anaty baoty manidina, dia efa tapa-bolo, hoy ny fanazavan'i Val.
"Nilaza i Carl fa very ny tongony havanana tamin'ny fianjerana," hoy izy. "Ary nanana marika nahaterahana teo an-tampon'io tongotra io izy."
Tamin'ny andro namonoana ny zanany lahy mpiasan'ny lalamby - nataon'i Gary Vinter, naiditra am-ponja mandra-pahafatiny - dia nankany Skinningrove izy hanangona garan-dalamby.
"Ny andro nianjeran'i Dornier dia nandaroka baomba an'i Skinningrove aloha izy ary nanidina tany Middlesbrough manaraka ny lalamby," hoy i Val.
I Carl sy Richter dia nanao ny diany tamin'ny andro nahafatesany.
“Betsaka loatra ny fifanandrifian-javatra hafahafa, ary heveriko fa raha teto i Carl dia nilaza izy hoe 'Mino ahy ve ianao izao'?”
Ny iray amin'ireo mpikaroka malaza ao amin'ny firenena manoloana ny trangan-javatra ara-tsaina dia niaiky fa talanjona tamin'ny antsipiriany momba ny fahafatesany roa izy.
"Mikaroka tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray izahay, saingy tsy dia mahatalanjona toa ity iray ity," hoy i David Christie-Murray, mpikambana ao amin'ny Society for Psychical Research, naorina tamin'ny 1882 ary monina any London ankehitriny.
“Toa tranga mahavariana ity amiko, ary iray amin'ireo azoko antoka fa ho liana amin'ny fanadihadiana ny SPR raha te-hanao izany ny fianakaviana.”
Ny zavatra niainan'i Carl dia efa voatsipy tamin'ny boky antsoina hoe The Children That Time Forgot nataon'i Peter sy Mary Harrison, ary amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra US. Izy ireo koa dia voarakitra an-tsoratra tsara tamin'ny gazety anglisy sy alemà, anisan'izany ny Gazety fony vao sivy taona i Carl.
Saingy nilaza ny ray aman-dreniny fa niharan'ny fanesoana tany am-pianarana izy noho ny filazany ny 'fiainana taloha'.
"Rehefa nanomboka izany dia tsy tian'i Carl intsony ny miresaka momba azy io," hoy ny reniny.
"Fa nino an'izany foana izy."
Nilaza tamin'ny Gazety ny dadany fa saro-kenatra izy tamin'ny voalohany. "Narary aho tamin'ny nataon'i Carl momba izany," hoy izy. "Fa angamba mino bebe kokoa amin'ny vatana vaovao indray aho."
Ny ekipan'ny ekipa Dornier telo hafa dia nalevina tao Thornaby taorian'ny fianjerana tamin'ny 1942, saingy tsy natory niaraka tamin'ny mpiara-miasa taminy i Richter raha tsy 'nahitana' indray ilay fiaramanidina 55 taona taty aoriana nataon'ny mpiasan'ny rano.
Fanamarihana momba ny Evening Gazette Lahatsoratra momba ny raharaha momba ny Revelarnandin'i Carl Edon
The Evening Gazette lahatsoratra dia nilaza fa very tongotra iray i Heinrich Richter tamin'ny fianjeranan'ny fiaramanidiny, mifanaraka amin'ny filazan'i Carl fa very tongotra izy tamin'ny fianjeranan'ny fiaramanidina izay nitarika ny fahafatesany. Tsarovy fa i Carl dia nanana marika nahaterahana lehibe teo amin'ny sisiny havanana, izay mety misy ifandraisany amin'ny famoizana rantsambatana.
Ny tsy fitovizan-kevitra dia misy ny filazan'i Carl fa Robert no anarany, fa tsy Heinrich, ary mpanamory fiaramanidina izy fa tsy mpitifitra. Angamba i Carl dia nanakorontana ny anarany sy ny asany teo amin'ny fiaramanidina niaraka tamin'ny mpiasa ekipa iray hafa tamin'ilay sidina nahafaty olona iray, na angamba iray hafa.
Fiovana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-monina: Tamin'ny fotoana niainany taloha, Robert dia mpanamory fiaramanidina baomba baolina alemana, raha teraka tany amin'ny fianakaviana Britanika i Carl. Ity tranga ity dia mampiseho fa afaka miverina miverina any amin'ny tanin'ny fahavalo iray ny olona vao tafaverina.
Eritrereto ve raha nisy mpiady alemà iray nandeha hiady tamin'i Angletera raha fantatr'io mpanamory io fa mbola hiverina ho olom-pirenena anglisy indray io mpanamory io?
Izany dia mampahatsiahy ny tranga vao teraka indray John B. Gordon Jeff Keene, izay a Mpifindra-monina Amerikana an'ady Officier reincarnated ho Connecticut Union Yankee. Nanamarika i Jeff fa nandritra ny androm-piainany ankehitriny, dia nanana razambe niady tamin'ny Conférences izy. Nieritreritra mihitsy aza i Jeff fa ny fianakaviany any avaratra dia mety niady taminy, toa an'i John B. Gordon, nandritra ny fiainany taloha.
The Anne Frank | Barbro Karlen Ny tranga koa dia mampiseho fa tena misy tokoa ny ady an-trano, satria nanenjika an-jambany alemana i Anne Frank ary maty tany amin'ny toby fitanana, ary nandritra ny androm-piainany ankehitriny dia teraka tamin'ny fianakaviana Kristiana tany Soeda i Barbro.
Endrika ivelany: Ian Stevenson, MD, dia nanamarika fa manana karazana fandefasana alemà, ary ny toetran'i Aryana, toy ny volon'ny volo manga sy maso mena, mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny fianakaviany.
Toy izany koa, i Stevenson dia nanamarika fa tamin'ny tranga marobe izay notadiaviny tany Birmania, izay antsoina ankehitriny hoe Myanmar, dia maro ireo ankizy Burmese no nahatsiaro ny androm-piainany taloha ho an'ireo mpanamory fiaramanidina Air britanika na amerikana maty tany Birmania, fandresena japoney nandritra ny Ady Lehibe II.
Raha toa ny zaza Birmana matetika manana volo mainty, maso sy hoditra, ireo ankizy ireo izay nahatadidy ny fiainana Kaokazy taloha dia nanana volo miloko. Ireo tranga ireo dia manondro fa na dia mety miova aza ny firazanana sy ny foko avy amin'ny nofo iray ka hatramin'ny iray hafa, dia hitazona ireo endrika ara-batana tamin'ny andro taloha, toy ny lokon'ny volo. Ny fitazonana ireo fisehoan-javatra toy izany dia azo atao manamora ny alàlan'ny maodelin'ny angovo fanahy, izay resahina etsy ambany Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano.
ao amin'ny Evening Gazette lahatsoratra, nilaza ny ray aman-drenin'i Carl fa nahita fitoviana hafahafa teo amin'i Carl sy Heinrich Richter izy ireo. Ny fampitahana ny sary dia omena, misy fitoviana hita, na dia manify kokoa noho i Carl aza i Richter.
Fiainana ela velona: Araka ny nomarihina, Carl dia nanana marika nahaterahana lehibe teo amin'ny sisiny havanana, izay mety misy ifandraisany amin'ny fahaverezan'ny tongotra iray an'i Heinrich Richter tamin'ny fianjerany fiaramanidina.
Fanamarihana momba ny Neo-Nazism sy ny vatana vaovao
Ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vovoka indray ny fiainan'i Robert | Carl Edon dia afaka manome fanazavana momba ny Neo-Nazi hetsika. Toy ny nanintona an'i Alemaina sy ny alemà i Carl, mety ho efa niaina tany Alemaina Nazi ihany koa ireo voasarika ho amin'ny Neo-Nazis. Na dia mety hahalalise azy aza ny antony mety hahatonga ny olona ho tia ny Neo-Nazisma, ny fikarohana momba ny firazanana indray dia mampiseho koa ny fahadisoana ao amin'ny lojikan'ny Neo-Nazis.
Izany fahadisoana izany Ny fanahy dia afaka manova fivavahana, foko, firenena ary foko avy amin'ny fampidirana iray mankany amin'ny iray hafa. Tamin'ny tranga tamin'i Carl Edon, nanamarika izahay fa niova ny zom-pirenena; Solonavalona alemà iray indray no nanjaka tany amin'ny firenena izay indray mandeha, fahavalon'ny Angletera.
Toy izany koa, ny Neo-Nazi dia afaka miverina miverina indray amin'ny maha-Jiosy, Afrikana mainty hoditra, na amin'ny foko na foko hafa naorin'ny Neo-Nazi. Tsy vitan'ny hoe azo atao izany, fa avy amin'ny fomba fijery karmik, tena azo inoana izany.
(1) Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 68